पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना एक जनाको मृत्यु Global TV Nepal
एएफसी महिला एसियन कप–२०२२ : नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा सुनिता बराल चयन खर्बाैँ रुपैयाँ तलमाथि पर्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीबाट ८ जनालाई माफी, ५२३ जनाको कैद कट्टा काठमाडौँको फोहोर फाल्न बञ्चरेडाँडाका स्थानियबाट अबरोध १,०६६ जनामा कोरोना संक्रमण, १६ को मृत्यु मलेशियाबाट एकैदिन ६ जनाको शव सँगै १५ जनाको अस्तु नेपाल आइपुग्यो प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना एक जनाको मृत्यु
ग्लोवल टि.भी. सोमवार, मंसिर ८, २०७७ 0
पोखरा । पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । दिउँसो १ः ४० बजे प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा पोखरा २८ का २९ वर्षीय राजु गैह्रै नेपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी सुवास हमालले जानकारी दिए ।
हमालकाअनुसार गैह्रेको उपचारका क्रममा मेट्रोसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा काठमाडौं बुढानीकण्ठकी २८ वर्षीया सिला श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएकी छन् । घाइते श्रेष्ठको अवस्था गम्भीर छ । उनलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
ल्याण्डिङ गर्ने क्रममा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भएको हमालको भनाइ छ ।
१,०६६ जनामा कोरोना संक्रमण, १६ को मृत्यु
मलेशियाबाट एकैदिन ६ जनाको शव सँगै १५ जनाको अस्तु नेपाल आइपुग्यो
दशैंको मुखमा मुगु–कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव सुरु
कहिले खुल्छ चिडियाखाना ? यस्ता छन मापदण्ड
देशभर थपिए ४ हजार ४ सय ९९ संक्रमित
बाँकेमा थप आठ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
सुर्खेतमा आगलागी ९ घर जलेर नष्ट
भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट
अपडेट – बारीमा अवतरण गरेको रहेछ देउवा सवार हेलिकप्टर
एएफसी महिला एसियन कप–२०२२ : नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित
खर्बाैँ रुपैयाँ तलमाथि पर्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप
जसपा नेपालले संविधान दिवसमा भाग नलिने